﻿﻿ Puntland State of Somalia – Madaxweyne ku- xigeenka dowladda Puntland oo Garowe ka daah-furay Asbuuca Naas-nuujinta Adduunka.
Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Puntland ayaa barnaamijkan soo diyaarisay, waxaana Madaxweyne ku-xigeenka ku wehlinaayey Wasiirka Caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax , masuuliyiin ka tirsan Wasaaradda, Ururada Haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.
Madaxweyne Ku-xigeenka dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo daahfuray Asbuucaan Naas-nuujinta ayaa sheegay in faa’iido ballaaran caruurta ay u leeyihiin naaska oo la nuujiyo, taas oo uu tilmaamay caafimaad ahaan inay tahay wax wanaagsan.
Sidoo kale Madaxweyne ku-xigeenka ayaa Madaxda Wasaaradda Caafimaadka Puntland iyo Saraakiisha Caafimaadkaba faray inay wacyigalinta gaarsiiyaan dhammaan gobolada Puntland, isla markaana hooyooyinka la dareensiiyo faa’iidada laga helayo caruurta oo naaska ay siiyaan.
XAFIISKA WARFAAFINTAMADAXTOOYADA DOWLADDA PUNTLAND